Bubble Bhalobhasha 🥇 Faka futhi ujabulele kusuka emulator.online
I-Bubble Shooter ngumdlalo we-Android ne-iOS odinga ukucabanga okusheshayo nokukhomba okuqondile. Umdlalo unokubukeka okumibalabala ne-gameplay elula kakhulu. Hlola amathiphu ethu futhi ufunde ukudlala lo mdlalo wokulutha.
Idlalwa kanjani i-Bubble Shooter 🙂
Ukudlala i-Bubble Shooter online mahhala, kufanele nje landela le miyalo igxathu negxathu:
I-Paso 2. Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kufanele kuphela hit play futhi ungaqala ukukhetha ukucushwa okuthanda kakhulu. Uma usunqobile umdlalo ungakwazi ukukhuphula izinga. Kukhona ingqikithi yamazinga ama-5.
Isinyathelo se-4. Thola ukuqeda wonke Bubbles in the game.
Uyini uBubble Shooter? 🤓
I-Bubble Shooter ingenye ye- imidlalo yokusebenzisana i-bubble Bhalobhasha edume kakhulu eyaziwayo, ngenxa yokudlala kwayo kalula futhi enembile kakhulu. Ungakusho lokho Kuyinhlanganisela ye- eminye imidlalo emibili edume kakhulu njenge "iTetris" kanye ne- "connect four", okwenza iBubble Bhalobhasha ibe ngumdlalo omnandi kakhulu.
Inhloso I-Bubble Shooter ilula kakhulu: qoqa amaphuzu amaningi ngangokunokwenzeka ukubhubhisa amagwebu anemibala. Ukuze uchithe ama-bubbles, kuyadingeka ukuxhuma okungenani ama-bubbles amathathu ombala ofanayo.
Umlando we Ibhola adubule 🙂
Kuyinto ejabulisayo futhi ethandwayo umdlalo wephazili esidlale sonke ngesikhathi esithile. Kodwa-ke, abaningi abazi ukuthi izimpande zawo zikumdlalo ophume ku izingqungqulu zaseJapan eminyakeni yama-80s, futhi ekuqaleni lalibizwa ngokuthi iBubble Bobble. Kuze kwaba ngama-90s lapho ifike eNtshonalanga, kepha ngoshintsho oluthile oluvela kumdlalo wokuqala.
I-Bubble Bobble Yakhishwa ngo-1986 emigwaqweni yaseJapan. Kuwo, amadragoni amabili amancane, uBub noBob, babebhekene ne- i-aventura, ngezinye izinto ze- puzzle nezimpi ezilwa nezitha thematic esigabeni ngasinye.
Ngomfanekiso ngokusho kwesikhathi, futhi okusikhumbuza opopayi baseJapan, i- ukudlala ivelele emakethe ngokuba kumnandi futhi umlutha, into ebalulekile ku-arcade. Ngaphezu kwalokho, bekungomunye wemidlalo yokuqala ukusebenzisa umqondo we "ukuphela okuningi", okuthile obekungaduma kuphela emidlalweni yesimanjemanje. Ngokuya ngomsebenzi womdlali, ukuphela kwe-adventure kungahluka
Njengasekuqaleni, umdlalo ubuphumelela eJapan kuphela, e 1994, inkampani yokukhiqiza iTaito yanquma ukuhlenga abalingiswa bayo abadumile futhi yabadedela ngesihloko esisha. Ngalesi sikhathi kubizwe I-Puzzle Bubble, futhi ngemishini ehlanzekile yama-puzzle. Umdlalo wawushaya ngokushesha.
Ngale nguqulo entsha, bakwazile ukwenza okuhlukile kunalokho ababekujwayele. Babeka eceleni amapulatifomu anezitha ukusenza singene ku- iphazili yomdlalo wezingcezu ezifanayo zombala ofanayo ukuthola amaphuzu. Kepha, ngokungafani noTetris, enye hit yesikhathi, izingcezu zazivela phansi phezulu, ekhishwe uBub noBob.
Uma ugcwalisa isikrini ngezicucu uzothola i-Game Over. Phakathi kwezingcezu ezaziphonswa, okwakungamabhamuza amanzi, kwakukhona izigelekeqe zomdlalo wakudala ukuze kubhekiselwe kuzo.
Abadlali ababili bangabamba iqhaza ngokubambisana futhi bazuze amaphuzu ndawonye. Umqondo bekuwukwethula abalingiswa beminyaka eyishumi edlule esizukulwaneni esisha sabadlali, kepha kulokhu ngobuso obusha. Futhi kwasebenza.
Izinhlobo ze-Bubble Shooter ⭐
Kunezinguqulo ezingaphezu kwezingama-30 zalomdlalo odumile, kepha ezifanele kakhulu ezenzelwe ukududuzwa kwamavidiyo kungaba:
I-Ultra Bust-A-Move futhi Puzzle I-Bobble Live ye-Xbox console.
I-Bust-A-Move I-Deluxe ye-PSP.
Iphazili Bobble 3D yeNintendo (3DS).
Iphazili Bobble Online kuphela i-PC.
Iphazili Bubble Disney (iOS).
Bubble Bhalobhasha, mahhala.
Kubo bonke labo okukhulunyiwe, ngaphandle kokungabaza, i-clone ephumelele kakhulu yeBust-A-Move yile Bubble Bhalobhasha
I-Bubble Shooter ine- ukubukeka okulula ngesiphakamiso esiqondile. Ngalesi sikhathi umdlalo awukhathazeki kangako ngokufaka izinto zakudala zochungechunge oluphefumulelwe, kepha kunalokho, ngokugcina i- Gameplay umlutha lokho kwenze ukuthi kudume.
Umdlalo ugcina uhlelo lokuphonsa ama-sphere phezulu ngomcibisholo, ukufanisa imibala yawo, nomaka wephoyinti. Umehluko omkhulu ukuthi I-Bubble Shooter inikezwa mahhala kuziphequluli noma izinhlelo zokusebenza zeselula, kuyilapho okwangempela kwayo kuhloselwe ukududuza umdlalo noma i-PC.
Imithetho ye-Bubble Bhalobhasha 😍
Okuyinhloko kwakho umgomo ku-Bubble Shooter kunjalo susa wonke amabhola anemibala kusukela esikrinini sokudubula amabhola anemibala ngenganono.
Khumbula kufanele fanisa okungenani amabhola amathathu anombala ofanayo ukuze zonke lezi ziqhume, futhi ngaleyo ndlela uqede isikrini ngawo wonke amabhola aqediwe. Imibala ye- amabhola aphuma emgqonyeni awahleliwe, ngakho-ke akulula njengoba kuzwakala.
Ukuze wenze lokhu, kufanele uthinte isikrini lapho ufuna ukudubula khona ngenganono, ucabangela umbala webhola oxoshiwe ukuthola ukulingana kwawo.
Ngaphezu kokuba ne- ikhono Lapho ukhetha ukuthi ubeka kuphi amabhola, kubalulekile futhi ukuthi ube nakho inhloso enhle. Ukufuna okungalungile noma ukuqondisa ngendlela engafanele kungaholela emphumela obulalayo.
Kufanele uqaphele ngoba uma imigqa yamabhola anemibala ifinyelela emhosheni, ulahlekile umdlalo futhi kufanele uqale phansi.
Uma usalelwe amabhola ambalwa ukuqeda umdlalo, noma imibala yebhola ephuma emgqonyeni ayikusizi ukuqeda amabhola, sizokukhombisa lokhu iqhinga.
Beka amabhola anemibala ukuthi awunantshisekelo cishe kweyodwa (noma eyodwa) yombala ofanayo osuvele unawo esikrinini, isibonelo kumabhola amabili ama-rose Lawa mabhola okuqala izosebenza njengesisekelo kokulandelayo, futhi uma usuthole lowo mbala udinga phula leso sisekelo, wonke amabhola aphezu kwawo nawo azonyamalala.
Ngale ndlela ungawuqeda umdlalo ngokunqoba futhi uvimbele amabhola ekufinyeleleni inganono ekudala ukuthi ulahlekelwe.